‘नेपाली भएर नेपालमा म’र्ने सपना पनि पूरा हुने भयो, एकदमै खुसी छु’ - Sidha News
‘नेपाली भएर नेपालमा म’र्ने सपना पनि पूरा हुने भयो, एकदमै खुसी छु’
काठमाडौं। आफनो जीवनको सारा समय पुतली खोज्नमा नै बिताएर पुलती बाजेको नाममा चर्चा कमाएका कोलिन स्मिथ अन्तत नेपाली हुने भएका छन् । २९ बर्षको उमेरमा नेपाल आई शिक्षक बनेर शिक्षाको ज्यो’ति छरेका उन लाई नेपालको मायाले यसरी तान्यो की सन् १९७२ देखि उनी निरन्तर नेपालकै भूमिमा आफनो जीवन व्यतित गरिरहेका छन् ।
पुतलीका बारेमा कयौँ पुस्तकहरु समेत निकालेका उनी लोमासमय देखि पोखरामा बस्दै आएका छन। डा. बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ न्यूरो सर्जन स्व. उपेन्द्र देवकोटालाई समेत पढाएका उनले धेरै पटक नेपाली नागरिकताका लागि अपिल गरे , आवेदन दिए । तर उनले नेपाली नागरिकता भने पाएका थिएनन् । नेपाली नागरिकता पाएरै मर्ने इच्क्षा रहेको बताउँदै आएका उनलाई अन्तत सरकारले मानार्थ नेपाली नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ।
जीवनको सारा समय नेपालमै बिताएका पुतली बाजेको इच्क्षा भने पुरा भएको छ । पाँच दशक लामो उनको नेपाल बसाई र उनले पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै नेपाल सरकारले यही मंसिर ५ गते उनलाई मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। उनले छोटो प्रतिक्रिया दिए ‘नेपाली भएर नेपालमा मर्ने सपना पनि पूरा हुने भयो। उनले भने ‘एकदमै खुसी छु। सबैलाई धन्यवाद’।